Ciidamada dowlada oo shacab ku xasuuqay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada dowlada oo shacab ku xasuuqay Muqdisho
MUQDISHO(KEYDMEDIA) Ciidamo ka tirsan dowlada KMG ah ayaa shacab Soomaaliyeed ku Xasuuqay afaafka hore ee isbitaalka Baanaadir duhurnimadii maanta, waxaana halkaasi ku geeriyooday 17 ruux oo shacab ah iyadoona 50 kale ay ku dhaawacmeen.
Falkan ayaa ka danbeeyay kadib markii saakay ciidamo ka tirsan kuwa Nabad sugida dowlada ay maxkamad la’aan ku toogteen isgoyska banaadir nin ku hubeesnaa bastoolad kaasoo ka tirsan qeyb ahaan ciidamada dowlada wallow aanu xiligaasi wadan wax darees iyo aqoonsi ah midna.
Ciidamo ay isku meel ka soo jeedaan askarigi la toogtay ayaa goobta soo gaaray waxaana halkaasi ka dhashay shaqaaqo u dhaxeysa ciidamada Nabad sugida iyo ciidamadii uu ka tirsnaa ninka la toogtay.
Intaasi kadib ayaa waxaa goobta soo gaaray gaari ka mid ah gawaarida Suugaga ah ee ay dowlada leedahay kaasoo rasaas furay, waxaana rasaastaasi ay sababtay in halkii nin ee geeridiisa lagu muransanaa dartiis ayaa waxaa u geeriyooday 17 qof iyadoona 50 kale ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada dowlada ee sida macna darada ah hubka ugu wata gudaha magaalada muqdisho ayaa inta badan waxa ay waxyeelooyin kale duwan u geestaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gudaha magaalada Muqdisho.
Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa dhacadadan waxa ay la meel dhigeen dhacadadii xanuunka badneed ee 3 Dec 2009 ka dhacday Hotelka Shaamow magaalada Muqdisho, waxaana isbitaalka madiina oo badanka dhaawacyada la gaarsiiyay laga dheehanayay mashquul aad u badan.